Kana uri kuwana pachako wakazviparadzanisa munhu Pet Rescue Saga pamwero kuwana kunyaradzwa chokwadi zvimwe hausi woga! Mashoko akanaka ari pane mamwe mazano iripo kuedza uye crunch nzira yako kuburikidza vamwe makasimba nguva. The kiyi mutambo uyu kutenda wangu mugumisiro, ose Kutama munoita achava mugumisiro wayo kwauri kuti chokutanga kufunga zvaunoda kuita uye sei zvakanakisisa kuzadzisa izvi.
Vamwe ndeizvi mumakeji, izvi zvinogona kusunungurwa nokuparadza pedyo zvinogumbura …asi kwete Balloons!
Unofanira kutanga kuongorora bhodhi rako, imi vashoma unotii? kana iri nyaya neumwe mutowo zvinoita? varipo Balloons, mumakeji, mabhokisi dzinovaraidza, matsime, Vhudzi yaida makiyi kana mabhomba zvinofanira kuputswa vakasununguka? Kune vazhinji yakasiyana masangano ari mutambo uyu uye yokuzvifungidzira panze sei racho nomumwe zvinobudirira kunokosha!
mavara Balloons – runako nyore yakarova dzvuku chibharuma uye vose tsvuku zvidhinha rinyangarike, kana vari chisavepo. Balloons hazvidi kuti vachiwirirana pamwe neimwe nezvidhinha uye anogona kuva batsira kuti uvhure puranga pamwe shoma zvinobvira machisi, chete yeuka kana kuaridza pamwe nebhomba havazodyari basa. Use balloons wisely to create bigger matches.
Zvizarira – Vamwe siyana vane zvidhinha mumakeji, unofanira kutsikwa izvi vaine pedyo dies kusunungura zvidhinha kuti vakwanise kuparadzwa. Kazhinji zvakakosha kuti pfungwa chichisunungura izvi chisavepo kutigumbura zvimwe ungazviona wava kubva unotii.
mabhomba – shoma matema nerunako izvi itai chii mabhomba sei best..they enda tiguu! zvishoma kuwedzera, chinhu zvakare kunoshamisa pano asi akapoteredza zvidhinha vachaparadzwa, tizadzise nokuti Kuvhura nzira kuti akarasika shoma pooch, Ndinoda kuchengetedza mabhomba dzangu kushandiswa nechepasi chaizvo. Cherechedza unogona kuisa kure bhomba pedyo inovaraidza zvikuru zvakachengeteka, chaizvoizvo dont sokuti pfungwa! Vamwe siyana vane mabhomba encased mu girazi kuti rinoda kutanga akaputswa.
Akasunungura mabhomba angaponeswa kusvikira inovaraidza inongova pamusoro payo.
rakakiyiwa matombo! – munoziva imi kuwana uchida kiya kukwira dombo? Aihwa? zvakanaka mumwe pa King anoita, zvakadaro makiyi zvakavigwa pasi bhodhi, kazhinji regirazi nyaya kuti zvinodiwa kuti mutsindo akazaruka kubudikidza kana Kudonha pasi kana mugomo padombo, paipi, ikakuruma enyika kana mamwe asingashumbi chinhu (kwete pana imwe girazi bhokisi kunyange) kamwe kiyi anosunungurwa iwe dont kuti kurishandisa pakarepo, zvichaita ukashamwaridzana kusvikira unofanira kurishandisa. Blocks kana dzinovaraidza dont donhwe kare rakakiyiwa matombo, ndokusaka vanofanira kusunungurwa pakutanga!
Double ended spring – ichi chidimbu zvishoma geniusness kamwe kusashanda INOGADZIRA rose mutsetse yakatambarara mune zvose mirayiridzo, vari chaizvo kana atarisana mabhokisi simbi!
mabhokisi Metal – hongu ivo zviripo…I dont kuziva nei? chete nemamwe akawedzera kumhanya dhumhira ndinofungidzira. Haagoni vachiwirirana pamwe chinhu kuparadzwa ..unless kwayo bhomba kana tsime! Vanogona zvikuru muchishungurudza kana kushandisa kunyika dzenyu dzinovaraidza pavari sezvavari nhubu, pasina chinhu kuti kuchivabudisa ivo kungogara ipapo.
wambonzwa zvishoma boxed mu?
Top Pet Ndisunungurei mazano uye mazano, 10.0 out of 10 based on 1 rating